Polyurethane Camera Fibreglass Ilaphu
Ilaphu le-PTFE fiberglass
ngomphathi ku 21-10-11
Ukuba ukhe wasebenzisa eyona mpuku yokudlala ilungileyo, inzwa yayo ethe ngqo, i-DPI ephezulu kunye neenyawo ze-PTFE ezigudileyo azinakwahlulwa ukusuka kumphezulu womgangatho wokuyihambisa. Ewe intonga yakho inokukhangelwa ngaphandle kwephedi enikezelweyo, kodwa ayizukuhamba kakuhle, kwaye inokubiza umjikelo. Kungenxa yoko le nto ...
Izinto ezingama-38 zabantu abonqenayo kodwa abafuna indlu ecocekileyo
Bhala phantsi umhla ofumanise ukuba ezinye izixhobo zasendlini ongazikhathalelanga zineelebheli ezicocekileyo namhlanje. Siyathemba ukuba uyayithanda imveliso esiyicebisayo! Zonke ezi zikhethwe ngokuzimeleyo ngabahleli bethu. Nceda uqaphele ukuba ukuba uthatha isigqibo sokuthenga kwikhonkco kweli phepha, iBuzzFeed inokuthi ...
ngomphathi ku 21-09-22
Iglasi yefayibha yeglasi yokugquma ilaphu
ngomphathi ku 21-09-08
Iglasi yokwambathisa ngombane ilaphu lefayibha, ilaphu lokugquma ngeglasi ifayibha yelaphu - izinto eziphambili. Amacandelo ayo aphambili yi-silica, i-alumina, i-calcium oxide, i-boron oxide, i-magnesium oxide, i-sodium oxide, njl.njl.
Ubume kunye neempawu zeglasi yefayibha
Iglasi esetyenziselwa ukuvelisa ifayibha yeglasi yahlukile kuleyo yezinye iimveliso zeglasi. Iglasi esetyenziselwa iifayibha ezithengisiweyo kwihlabathi ziqukethe i-silica, i-alumina, i-calcium oxide, i-boron oxide, i-magnesium oxide, i-sodium oxide, njl njl.
Malunga nefayibha yeglasi
Ukwahlulahlula kweentsinga zeglasi Ngokwemilo nobude, ifayibha yeglasi inokwahlulwa ibe yifayibha eqhubekayo, ifayibha emide ubude kunye noboya beglasi; Ngokwenziwa kweglasi, inokwahlulwa ibe yialkali simahla, ukumelana nemichiza, ialkali ephezulu, ialkali ephakathi, amandla aphezulu, i-ela ephezulu ...
Iimpawu zefayibha yeglasi
Ifayibha yeglasi inokumelana nobushushu obuphezulu kunefayibha yendalo, ukungatshi, ukumelana nokubola, ukufudumeza ubushushu kunye nokugquma kwesandi (ngakumbi iglasi yoboya), ukuqina okuphezulu kunye nokugquma ngombane okuhle (njengealkali yefayibha yasimahla yeglasi). Nangona kunjalo, iyaphuka kwaye ihlwempu thina ...
Ingubo kwimarike yengubo yomlilo kunye nokukhula 2021-2028
Uxwebhu lokuphanda ngengubo yokutsha yomlilo lujolise ekunikezeleni ngolwazi lweenkcukacha-manani, ezinje ngengqikelelo yentengiso kushishino, izinga lokukhula lonyaka, iimeko zokuqhuba, imiceli mngeni, iintlobo zeemveliso, umda wesicelo kunye nemeko zokhuphiswano. Uphando lwentengiso yengubo yomlilo lubonelela ...
Ifayibha yeglasi yinto elungileyo yokwambathisa! Ifayibha yeglasi yinto engaphiliyo enezinto ezinesakhiwo esineempawu ezigqwesileyo .. Izinto eziyilwayo zi-silica, i-alumina, i-calcium oxide, i-boron oxide, i-magnesium oxide, i-sodium oxide, njl.
Izinto ze-38 zabantu abonqenayo kodwa abafuna ...
Iglasi grade ifayibha ubushushu c ...
I-4x4 Twill yeCarbon Fibre, Carbon Fibre, Ilaphu leCarbon Fibre Twill, I-Twill Fibre yeCarbon Fibre, Ilaphu leSilicone, I-2x2 Twill yeCarbon Fibre,